China Olee mmụọ larịị-arụ ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emepụta | Jiabei
Larịị tube nke mmụọ larịị ka nke iko. The n'ime mgbidi nke larịị tube bụ a curved elu na a ụfọdụ okirikiri nke curvature. The tube nwere mmiri mmiri. Mgbe larịị weturu, na egosipụta na larịị tube aga na njedebe nke larịị iji chọpụta larịị ọnọdụ. The ibu okirikiri nke curvature nke dị n'ime mgbidi nke spirit larịị, na elu mkpebi, na nta na okirikiri nke curvature, na Lower mkpebi. Ya mere, na okirikiri nke curvature nke spirit larịị na-ekpebi izi ezi nke spirit larịị. The spirit larịị bụ-eji inyocha na flatness, straightness, verticality na kehoraizin ọnọdụ ngwá echichi dị iche iche igwe ngwaọrụ na workpieces. Karịsịa mgbe odomo verticality, magnetik larịị nwere ike etinye obi gị dum na-akwụ ọtọ na-arụ ọrụ n'elu enweghị ntuziaka support, nke na-ebelata ịrụ ọrụ siri ma na-ezere n'ihe njehie mere site ahụ mmadụ si okpomọkụ ụzarị ọkụ na larịị.
The ala na akụkụ nke spirit larịị na-nri-angled owuwu nke ogologo 2000mm, na ziri ezi bụ n'ozuzu (0.02-0.025) mm / m. Ọ bụrụ na onye ọrụ nwere pụrụ iche chọrọ, ọ nwere ike ahaziri n'otu n'otu. The zeroing Ọdịdị nke ahụ spirit larịị bụ ihe pụrụ iche, jiri ya tụnyere ihe ot Ọdịdị: 1. Easy na efu. 2. Mgbe ukpụhọde, na efu ọnọdụ dịghị mfe mgbanwe. Dị ka e gosiri na ọgụgụ 1. Mgbe V-ekara uzo ala nke spirit larịị-agbagharị gburugburu isi axis nke 5 ugboro, ma ọ bụrụ na ndị na-egosipụta-akpali, ị nwere ike izute ndị a chọrọ site na ukpụhọde ịghasa 2. Nke a item e gbanwee na mmepụta na bụ n'ozuzu na-agbanweghi agbanwe.
Ọdịdị nke ahụ spirit larịị dịgasị dị ka nhazi ọkwa. Eku ụdị spirit larịị n'ozuzu esịnede a spirit larịị isi ahụ, a kwụ larịị, ihe adiabatic ahụ, a isi larịị, a cover efere na a efu ukpụhọde ngwaọrụ. Onye na-achị larịị n'ozuzu esịnede a larịị ahụ, a cover efere, a isi larịị ma a efu ukpụhọde ngwaọrụ.
The spirit larịị na-eji a spirit larịị dị ka a ọtụtụ ngwá ọrụ e ji atụ ihe na-agụ ihe. Larịị bụ a kaa akara iko tube, na longitudinal ngalaba nke dị n'ime ala bụ a okirikiri aak elu na a ụfọdụ okirikiri nke curvature. The iko tube nke larịị jupụtara a mmiri mmiri na a ala viscosity ọnụọgụ, dị ka mmanya, ether na ya ngwakọta. The akụkụ enweghị mmiri mmiri a na-emekarị na-akpọ a larịị afụ. E nwere ihe ụfọdụ na mmekọrịta dị n'etiti na okirikiri nke curvature nke longitudinal ngalaba nke dị n'ime elu nke iko tube na ngụsị akwụkwọ bara uru. Dị ka a mmekọrịta, nchepụta nke tụrụ ụgbọelu nwere ike tụrụ.
Post oge: Jan-09-2020
tripod , Wall mgbodo , Vh-525 Five Line , Total Station , erite , 8 Line Na 4 kwụ n'ahịrị ,